दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि मात्र लक्षण देखिन्छ - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि मात्र लक्षण देखिन्छ
दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि मात्र लक्षण देखिन्छ
प्राडा. प्रमोदकुमार सर्राफ वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कजेलका मिर्गौला विभाग प्रमुख हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गौलाका बिरामी बढ्दै गएको पाइएको छ । मिर्गौलाका बिरामीमध्ये आधाजसोलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण यो समस्या देखिएको प्राडा. सर्राफ बताउँछन् । खानपान, जीवनशैलीमा सुधार र स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाबाट यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा मिर्गौलासम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या, यसका कारण र रोकथामका उपायका बारेमा नेशनल मेडिकल कलेजका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
मधुमेहका बिरामीलाई मिर्गौलासम्बन्धी समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ?
मिर्गौलामा समस्या हुने अरू पनि कारण छन् । तर, मिर्गौलाको समस्या भोगिरहेकामध्ये करीब आधाजसो मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीहरू देखिन्छन्, अर्थात् मिर्गौलाको डायलासिस वा प्रत्यारोपण गरेकामध्ये ५० प्रतिशतलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण यस्ता समस्या आउने गरेको पाइएको छ । ४० प्रतिशतलाई मधुमेहका कारण भएको देखिन्छ भने उच्च रक्तचापबाट पीडित १० प्रतिशतमा मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । मिर्गौलामा पत्थरी र ट्युमरले पनि यो बिग्रिन सक्छ । तर मुख्य कारण चाहिँ मधुमेह र उच्च रक्तचाप नै हो ।
मिर्गौलामा समस्या आएपछि के कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
मिर्गौलाको समस्यामा शुरूमा लक्षण देखिँदैन । एउटा मिर्गौलाले पनि काम गर्न सक्ने भएकाले दुवै मिर्गौला बिग्रिएपछि मात्र लक्षण देखिन्छ । यस्तो बिरामीलाई पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ । मिर्गौला रोगका कारण पिसाब गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । सुतेर बिहान उठ्दा अनुहार र आँखा सुन्निएको देखिन्छ । रोगले च्याप्दै लगेपछि पिसाब बन्द हुने, शरीर सुन्निने, दम बढ्ने, भोक नलाग्ने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
मिर्गौला रोगको पहिचान र उपचार कसरी हुन्छ ?
मिर्गौलामा समस्या भए नभएको पिसाब र रगत परीक्षणबाट थाहा हुन्छ । यसमा समस्या आउन लागेको शुरुआतको अवस्थामै थाहा पाउन वर्षमा कम्तीमा एकपटक रक्तचाप, मधुमेह र पिसाब जाँच गराउनुपर्छ । युरिया क्रेटिन परीक्षणबाट यो थाहा हुन्छ । यस्तो परीक्षण सबै उमेर समूहका मानिसले गराउनु पर्दछ । कतिपयमा यस्ता परीक्षणमा धेरै खर्च लाग्ने मानसिकता पाइन्छ । तर यो औसत ५ सय रुपैयाँ खर्चमा गर्न सकिन्छ । शुरुआतमै पत्ता लागेमा यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । खानपानमा सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नियमित परीक्षण र उपचारले रोकथाम सहज हुन्छ ।
यसको उपचार कसरी हुन्छ ?
शुरूमा समस्या देखिँदैन । एउटा मिर्गौलाले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । जब दुईओटै मिर्गौलामा समस्या आउँछ, तब लक्षण देखिन्छ । औषधिले काम नगरेपछि हेमो डायलासिस गरिन्छ । तर यो उपचार भने होइन । यो बिरामीलाई राहतमात्र हो । यसमा मिर्गौलाले गर्ने काम उपकरणबाट गरिन्छ । यो हप्तामै दुई/तीनपटक गर्नुपर्दछ । प्रत्यारोपण शत प्रतिशत सफल नहुन पनि सक्छ । यसकारण खासगरी बढी उमेर भएका बिरामीलाई यो विधि बढी अपनाइन्छ । कम उमेरमै मिर्गौला बिग्रिएकालाई प्रत्यारोपणको सल्लाह दिइन्छ ।
मिर्गौलाको रोग लागेपछि यसको उपचार महँगो हुन्छ । यसलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा तपाईंको कही सुझाव छ कि ?
मिर्गौलाको प्रत्यारोपणमा कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ लाग्छ । र, महीनामा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि नियमित खानुपर्दछ । मिर्गौला दिनेले पनि स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउनु पर्दछ । विकसित देशमा प्रिभेन्टिभ स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छ । त्यहाँ मानिस बिरामी नै नहोस् भन्ने छ । त्यसमा सरकारको पहल हुन्छ । स्वास्थ्य बीमाको सहज व्यवस्था हुन्छ । ६/६ महीनामा स्वास्थ्य जाँच हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो छैन, प्रिभेन्टिभ उपायमा सरकारको पहल पनि त्यति छैन । क्युरेटिभ स्वास्थ्य सेवा छ । बिरामी भइसकेपछि उपचार गराउन अस्पताल जाने चलन छ । अहिले प्रत्यारोपणमा सरकारले १ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने गरेको छ । उपचारको खर्चको जोखिम वहनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी ढंगबाट विस्तार गर्ने हो भने यो सहज हुन सक्छ ।
मिर्गौलामा समस्या आउन नदिन केमा ध्यान दिनुपर्दछ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण एशियाका बासिन्दालाई पर्याप्त पानी पिउन सुझाव दिएको छ । हामीकहाँ पानी सहजै उपलब्ध हुन्छ, तर पिउन कन्जुसी गर्छौं । जुन देशहरूमा पानीको पैसा तिर्नुपर्छ, त्यहाँ किनेर खान्छन् । प्रतिघन्टा एक गिलास पानी पिउने गर्नुपर्छ । दिनमा कम्तीमा तीन÷चार लिटर पानी पिउनु पर्दछ । पानीको कमीले पिसाबमा संक्रमण भएर मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । सन्तुलित भोजन र दिनचर्या अपनाएर मधुमेह र रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ ।
मिर्गौलामा समस्या आउनुको एउटा मुख्य कारण मधुमेह रहेछ । मधुमेहको मुख्य कारण चाहिँ के हो ?
विश्वव्यापी अवलोकनले असन्तुलित जीवनशैलीलाई मधुमेहको कारण मानेको छ । विश्वमा ४ करोड मानिस यसबाट पीडित छन् । प्रत्येक पाँचजनामा एकजना मधुमेहका बिरामी पाइएको छ । हामीले सन्तुलित आहार र शारीरिक व्यायामको महत्त्व बुझैकै छैनौं । सन्तुलित भोजनमा ध्यान दिँदैनौं । सन्तुलित आहार गर्ने बानी नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो । मोटोपनालाई बरु प्रतिष्ठाको रूपमा लिन्छौं, तर यो समस्या हो भन्ने बुझेर नियन्त्रणको प्रयास गर्दैनौं । मोटोपना बढ्न नदिन सबै सचेत हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ संगठनले भारतमा सबैभन्दा बढी मधुमेहका बिरामी रहेको देखाएको छ । पहिले चीन एक नम्बरमा थियो, अहिले दोस्रोमा छ । नेपालीको खानपान र जीवनशैली भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ । यसकारण हामीकहाँ मधुमेहको समस्या धेरै छ । मधुमेह नहोस् भन्न सन्तुलित भोजन नै उत्तम उपाय हो । अधिकांशले उमेर र शरीरको तौलमा ध्यान दिएको पाइँदैन । तौल सन्तुलनमा राख्न खाना र व्यायाममा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ।
मधुमेह दुई प्रकारको हुन्छ । टाइप वान र टाइप टू भनिन्छ । टाइप वान बढीजसो २० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई हुन्छ । यो १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा पाइन्छ । यसमा इन्सुलिन बन्दैन । सन्तुलनमा राख्न इन्सुलिनको सुई नै लगाउनु पर्दछ । टाइप टु ३५/४० वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई बढी देखिन्छ । तर यसमा इन्सुलिन नै चलाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । औषधि खाँदा पनि हुन्छ । यस्तो असन्तुलित जीवनशैलीे र बडी मास इन्डेक्सअनुसार तौल नभएकाहरूलाई बढी हुने सम्भवना हुन्छ ।
खाना र व्यायामको सन्तुलन कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दक्षिण एशियाका मानिसले दिनमा दुईपटक खाना दुईपटक खाजा खानुपर्छ । बिहान खाजा, दिउँसो खाना, बेलुकी खाजा र राति फेरि खाना खान भनिएको छ । तर यो खाना सन्तुलित हुनु पर्दछ । विकसित देशमा त दिनमा ६ पटकसम्म खान्छन् । मानिसको तौलको हिसाबले कति किलो क्यालोरी चाहिन्छ, त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ । जस्तै– प्रतिकिलोग्राम ४० किलोग्राम क्यालोरी चाहिन्छ । ५० किलोग्रामको मानिसले दिनमा २ हजार किलोग्राम क्यालोरी खाए पुग्छ । यसमा डाइटिसियनले उचित सुझाव र तरीका बताउन सक्छन् । त्यसमा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटिन, प्mयाट सबै आउँछ । हामी भोक लागेको बेला मात्र खान्छौं, त्यो पनि आफ्नो स्वादअनुसार खान्छौं । टन्न मासु भात खाएर आराम गर्छौं । यसले मधुमेहको समस्या ल्याउँछ । मेडिकल साइन्सले सन्तुलित र शरीरको आवश्यकताअनुसार क्यालोरी समावेश हुनुपर्छ भन्छ । मानिसमा यो चेतनाको कमी छ । यसका लागि डाइटिसियनको सल्लाह लिन सकिन्छ । शरीरको उचाइ, उमेर र तौलको हिसाबले कुन खाना कति खाने भन्नेबारे डाइटिसियनले बताइदिन्छन् । हामी शुरूमा सल्लाह लिन मन पराउँदैनौं । बिरामी भइसकेपछि मात्र अस्पताल धाउँछौं ।
मधुमेहका लक्षण कस्ता हुन्छन् ?
बढी प्यास लाग्ने, बढी पिसाब लाग्ने र बढी भोक लाग्ने यसका मुख्य लक्षण हुन् । पानी पिएको केही बेरमै मुख सुक्ने, खाना खाएको १ घण्टा पनि नबित्दै भोक लाग्ने, राति ५/६ पटक पिसाब लाग्नेजस्ता समस्या भएमा त्यो मधुमेह हुन सक्छ । मानिस दुब्लाउँदै पनि जान्छ ।
मधुमेहलाई रोगको घर किन भनिन्छ ?
यो एउटा रोग लागेपछि अन्य धेरै रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा भएन भने यसले अन्य धेरै रोग निम्त्याउँछ । रक्तचाप, मुटुको रोग, नसा जाम मधुमेहका कारण पनि हुन्छ । यसले मस्तिष्क र नसा कमजोर बनाउँछ । जीउ दुख्ने, पैताला पोल्ने, आँखा कमजोर हुँदै जाने जस्ता समस्या आउँछन् । यसले मिर्गौलालाई असर पार्छ । सुगर नियन्त्रणमा भएन भने मधुमेह लागेको २÷३ वर्षमै मिर्गौलाको समस्या देखिन थाल्छ । यो नियन्त्रणमा छ भने १५/२० वर्षपछि मात्र यस्ता समस्या केही मात्रामा देखिन सक्छ ।
मधुमेह लाग्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?
जीवनशैलीमा सुधार नै यसको मुख्य उपाय हो । शरीरको तौल र उमेरको हिसाबले सन्तुलित खाना खानुपर्दछ । हामीकहाँ भात बढी खाने चलन छ । स्वादका लागि नून, मसाला र चिल्लो बढी खानु हुँदैन । भिटामिनहरू खानाबाटै पूर्ति हुनुपर्दछ, शरीरमा बन्दैन । मिनरल्स पनि शरीरमा बन्दैन । त्यसैले शरीरका लागि आवश्यक सबै तत्त्व भएको सन्तुलित आहार सेवन गर्नुपर्छ ।
Previous articleसामुदायीक विधालयलाई नमुना विधालय बनाउन आवश्यक : सांसद यादव
Next articleवीरगंजमा सडक विस्तारको सकस : १५ दिने समयसीमा आज सकियो,डोजर लगाएर भत्काउने काम सुरु
पर्सामा थप ३४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार ढल्ने, राउतले मनमौजी गरेको सांसदहरुको आरोप
वीरगञ्जको सडकमा मृत भेटिएका युवकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि